I-Google Slides: Isenzi esiku-inthanethi sombukiso weslayidi | i-Google Workspace
Ngena ngemvume Iya ku-Slides Zami-slides for work
Khuluma izindaba ezinomthelela omkhulu nge-Google Slides
Sungula, phrezenta, uphinde uhlanganyele kumaphrezentheshini aku-inthanethi ngesikhathi sangempela futhi kusukela kunoma iyiphi idivayisi.
Zami-slides for work Iya ku-Slides
Bona ukuthi ungenzani nge-Google Slides
Yenza amaphrezentheshini amahle, ndawonye
Hlala uvumelanisa kumaslayidi akho, ngokwabelana okulula nokuhlela kwesikhathi sangempela Sebenzisa amazwana uphinde unikeze izinto zesenzo ukuze wakhe imibono yakho ndawonye.
Phrezenta ama-slideshow ngokuzethemba
Ngokubusebenziseka okulula kokubuka iphrezenta, amanothi esipikha, namagama-ncazo, i-Slides senza ukuphrezenta imibono yakho kube lula. Ungaphrezenta nakumakholi evidiyo e-Google Meet ngokuqondile kusukela ku-Slides.
I-Slides ixhunywe ngokucabanga kwamanye ama-Google app owathandayo, okukulondolozela isikhathi. Shumeka amashadi kusukela ku-Google Sheets noma uphendule kumazwana ngokuqondile kusukela ku-Gmail. Ungaphinda useshe iwebhu ne-Google Drive ngokuqukethwe okuhambisanayo nemifanekiso ngokuqondile kusukela ku-Slides.
Nwebela ukuhlanganyela nokuhlakanipha kumafayela e-PowerPoint
Hlela kalula amaphrezentheshini e-Microsoft PowerPoint ku-inthanethi ngaphandle kokuwaguqula, nesendlalelo kuzakhi zokuhlanganyela ezithuthukisiwe ze-Slides' nezokusiza ezifana namazwana, izinto zesenzo, Nokuqamba Okusmathi.
Nge-Slides, wonke umuntu osebenza kuhlobo lwakamuva lephrezentheshini Futhi nangokuhlela ulondoloza ngokuzenzekelayo kumlando wohlobo, futhi kulula ukulandelela noma ukuhlehlisa ushintsho.
Yenza amaslayidi ngokushesha, ngokuhlakanipha okwakhelwe ngaphakathi
Izakhi eziwusizo ezifana Nokuqamba Okusmathi nosizo lokulungisa ngokuzenzekela zikusiza wakhe amaslayidi ngokushesha futhi nangamaphutha ambalwa.
Ungafinyelela, usungule, uphinde uhlele ama-Slides nangaphandle kokuxhumeka kwe-inthanethi, okukusiza uhlale ukhiqiza kusukela noma ikuphi.
Sisebenzisa izindlela eziphuma phambili zomkhakha zokuvikela ukugcina idatha yakho iphephile, okufaka ukuvikelwa kohlelo olungayilungele ikhompyutha. I-Slides iphinda idabuke kumafu, okususa isidingo samafayela asendaweni kuphinde kunciphise ingcuphe kumadivayisi akho.
Wonke amafayela alayishwe ku-Google Drive noma asungulwe ku-Slides abethelwe endleleni kanye nasekuphumuleni.
Imikhiqizo yethu, efaka i-Slides, ngokuvamile idlula ekuqinisekisweni okuzimele kokuvikelwa kwayo, ubumfihlo, kanye nezilawuli zokuthobela.
I-Slides ithobela ukuzinikela okufanayo okuqinile nokuvikelwa kwedatha njengawo wonke amasevisi ebhizinisi le-Google Cloud.
Asilokothi sisebenzise okuqukethwe kwakho kwe-Slides ngezinjongo zesikhangiso.
I-Google Slides iyingxenye ye-Google Workspace
Zami-slides for work
Finyelela, sungula, uphinde uhlele amaphrezentheshini akho noma ngabe ukuphi — kusukela kunoma iyiphi idivayisi yeselula, ithebulethi, noma ikhompyutha — nanoma ungaxhunyiwe kwi-inthanethi.
Khetha kusukela kuzinhlobo zamaphrezentheshini, imibiko, nezinye izifanekiso ezidizayinwe ongoti ukuze uqalise izinto ngokushesha.
Vakashela Igalari Yesifanekiso se-Slides ukuze uthole okuningi.